Caymiska wireless ee Jaamacadda Beijing Forest ee Shiinaha
Macluumaadka Macaamiisha Beijing Forestry University (BFU, ama BJFU) waa jaamacad ku taal Degmada Haidian, Beijing oo diiradda saareysa keymaha. Waa jaamacad bey'ad wadaag u ah wadaagida aqoonta sayniska, injineernimada, sharciyada, farshaxanka iyo luuqadaha adduunka. Shuruud - Daboolida waxqabadka sare ee WiFi ...
FIFA U20 Koobka Adduunka 2019 ee Poland
Macluumaadka Macaamiisha Koobka Adduunka ee U-20 FIFA ayaa lagu qaban doonaa 6 magaalo oo ku taal Poland laga bilaabo Maajo 23 ilaa Juun 15 ee 2019. Shuruudaha - Helitaanka cufnaanta sare ee cufnaanta - Daboolid buuxda iyo wifi waxqabad sare leh - Wareeg aan xaddidneyn - Bannaanka banaanka wireless Codsiyada DCN Shabakada Internetka Sc ...
DCN waxay ka caawisaa Rostelecom inay dhisto caymiska WiFi ee miyiga Ruushka
Macluumaadka Macaamiisha Rostelecom waa kan ugu weyn ee ka shaqeeya isgaarsiinta qaranka ee Ruushka oo leh shabakadda ugu weyn ee laf-dhabarka gudaha (qiyaastii 500,000 km) oo ku taal Ruushka waxayna siisaa marin “marinkii ugu dambeeyay” 35 milyan oo qoys guud ahaan dalka. Shuruudaha -Shaqeynta marin u helka shabakadda ee adeegsadayaasha ku yar meelaha miyiga ah ...
Xalka Shabakada Gaadiidka ee DCN
Nidaamka AFC-da ee aasaasiga ah waxaa loola jeedaa Nidaamka Aruurinta Lacagta otomaatiga ah, waa nidaam shabakad otomaatig ah oo iibinta tigidhada, lacag-bixinta, hubinta iyo tirakoobka gaadiidka tareenka. Nidaamku wuxuu ku saleysan yahay kumbuyuutarka, Isgaarsiinta, shabakadda, iyo xakamaynta otomaatiga ah. Nidaamka AFC waa loo qaybin karaa ...
Xalka Shabakada Tafaariiqda DCN
Guudmarka Gundhigga Dukaameeyaha maanta ayaa dalbanaya - oo wuxuu u rogi doonaa daacadnimadooda noocyada kale marka filashooyinka aan la gaadhin. Hababka wax iibsiga ee la adeegsanayo ayaa ku qasbaya tafaariiqleyda inay qiimeeyaan waaya-aragnimadooda dukaanka si aysan u soo jiidan macaamiisha cusub oo keliya, laakiin ay u helaan habab cusub oo ay ku sii haysan karaan macaamiisha hadda jira ...
Xalka Solution DCN ISP Access Network
Dulmarka Dul-dhigga Tartankii suuqa ee adkaa, suuqa adeeg-bixiyeyaasha Adeegga Internet-ka (ISPs) wuxuu noqday mid khafiif ah oo dhuuban (tusaale ahaan, baal-ballaar, MPLS VPN iyo SMS). Dhanka kale, Sirdoonka Artificial (AI), Xaqiiqda Virtual (VR), falanqaynta xogta weyn, iyo xisaabinta daruuraha: ...
Xalka Shabakada Korjoogteynta IPN DCN
Xalalka dabagalka macluumaadka IP-da waxaa si ballaaran looga isticmaalaa dhammaan warshadaha, sida: · Waxbarashada: kormeerka fog ee garoomada dugsiga, wadiiqooyinka, hoolalka iyo fasallada, iyo sidoo kale dhismooyinka qaarkood; · Gaadiidka: kormeerka fog ee xarunta tareenka, wadada tareenka, wadada weyn iyo garoonka diyaaradaha ...
Xalka Shabakada DCN Hotel
Gundhigga Warshadaha Shabakadda Hoteellada Xarumaha casriga ahi waxay noqdaan qalab lagama maarmaan u ah nolol maalmeedkeena. Markaad safarka ku jirto, waxaad u baahan kartaa inay ka shaqeeyaan xafiiska meel fog, inay ka qaybgalaan kulan fog, inay ballansadaan tareen ama tigidh diyaarad, inay helaan oo ay diraan emayl, iyo wixii la mid ah. Sidaa darteed ...
Xalka Shabakada Daryeelka Caafimaadka ee DCN
Macluumaadka Asalka ee xarunta daryeelka caafimaadka, isbitaalku had iyo jeer wuxuu bukaan socodka u bixiyaa adeegyo caafimaad oo kala duwan, sida daryeelka degdega ah, qalliinka, dhalmada iyo adeegyada dhalashada. Si loo bixiyo daryeelka caafimaad ee ugu fiican, iyadoo la adeegsanayo cilad-saaris lagu kalsoonaan karo iyo ...
Xalka Xarunta Xogta ee DCN
Macluumaadka Asalka Adeegsiga baahsan ee daruuriga xisaabinta, xogta weyn iyo internetka mobilada ayaa dedejinaya bilaabida adeegyada cusub iyo abuurista taraafikada xarunta xogta badan. Tani waxay u baahan tahay jawaab degdeg ah shabakadda xarunta xogta. Xalka shabakada xogta xarunta DCN ayaa macaamiisha siisa dhismo ...
Xalka Shabakadda Xarunta Adeegyada ee Ubucda ee DCN
Macluumaadka aasaasiga ah Horumarka degdegga ah ee internetka, gaar ahaan u-adeegsiga, daruuraha, tiknoolajiyaddan ayaa horseedaysa isbeddel ku yimaada warshadaha waxbarashada. Cloud waa astaanta ugu weyn ee waxbarashada aasaasiga ah iyo dhinacyada tacliinta sare labadaba. Helitaanka fudud ee agabyada waxbarashadu waa muhiim ...